GERISS - Ihe Nlere Ọkachamara na Mgbakwunye
Ugboro abụọ Wall ebughibu Box Igbe Igbe
Ugboro abụọ mgbidi ebughibu igbe drawer usoro usu-eji maka kichin & ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị ebughibu igbe drawer usoro eji nkịtị adụ nso undermount drawer slide na kpochidoro ngwaọrụ. Nwekwara ike ịgbanwe iji push imeghe zoro ezo drawer slide na n'ihu mkpachị. Ihe omuma a bu ihe eji abanye drawer nwere ike iji ya na drawer igwe na drawer osisi. Nwere ike ịchekwa ọnụ ahịa nke ngwa ahịa maka gị.
Anabata gị Geris HARDWARE
Professional ngwá ụlọ mmepụta ihe kemgbe 1999.
Igwe anaghị agba nchara square aro BBQ oven turnspit / ...
Nkọwa: Product aha: S ...
Single ntị gas cooker oven ụzọ mgbabere uzo
Nkọwa: Aha ngwaahịa: ...
Zoro-ezo na kabinet mgbabere uzo zoro ezo
86mm Elu drawer akụkụ panel slide metal igbe d ...
150mm elu drawer slides ebughibu eji kichin ...
Nkọwa: Typedị: 150mm ọ ...
118mm metal igbe drawer slide ebughibu drawer usoro
Nkọwa: Typedị: 118mm m ...
Silent adụ nso ije usoro abụọ wa ...
Nkọwa: Typedị: Silent s ...
Ugboro abụọ Wall Metal eji drawer System
Nkọwa: Typedị: Ugboro abụọ w ...
Nkọwa: Typedị: 48mm tel ...
45mm full ndọtị adụ mmechi bọl agba d ...
Nkọwa: Typedị: 45mm ful ...
45mm full ndọtị telescopic ọwa hydraul ...
Nkọwa: Typedị: 45mm zuru ezu ...
W45 full extention adụ mmechi bọl amị dr ...
Nkọwa: Typedị: w45 zuru ezu ...
45mm Full ndọtị bayoneti ugwu drawer slide
Nkọwa: Typedị: 45mm Full ...
45mm Full ndọtị igwe anaghị agba nchara drawer slid ...
Full ndọtị telescopic ọwa 45mm bọl bea ...
Nkọwa: Typedị: Full ext ...
37mm Full / Mmaji Atọ telescopic ọwa b ...
Nkọwa: Typedị: 37mm Ful ...
17mm Single ndọtị n'akụkụ ugwu telescopic dra ...
Nkọwa: Typedị: 17mm Sin ...
Companylọ ọrụ anyị SHANGHAI YANGLI FURNITURE MATERIAL CO., LTD guzobere na 1999, na-elekwasị anya na ngwaike ngwaike ngwa mmepe na mmepụta. Anyị na-arụ ọrụ ugbu a ụlọ ọrụ R&D abụọ na steeti ụlọ ọrụ nka na Shanghai na Zhongshan, Guangdong. A na-ere ngwaahịa anyị n'okpuru akara abụọ aha ọma: YANGLI na Geriss. Ha bụ sistemụ drawer, slide zoro ezo, bọọlụ na-ebu slide, zoro ezo zoro ezo, njikwa, ihe mkpuchi oven na ngwa ngwa akụrụngwa ndị ọzọ, nke eji arụ ụlọ, oche, ngwa ụlọ na mkpanaka. Ngwaahịa anyị enwetala aha n'etiti mba 40 n'ụwa.
Nọvemba / 17/2020
Ọkt / 16/2020